महाशिलामा कृषी क्रान्ति, एक घर एक टनेल अनिवार्य : गाउँपालिकाको अभियानले मुर्तरुप लिदैँ ! – ebaglung.com
महाशिलामा कृषी क्रान्ति, एक घर एक टनेल अनिवार्य : गाउँपालिकाको अभियानले मुर्तरुप लिदैँ !
२०७६ बैशाख २५, बुधबार १३:५७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
निर्मल पौडेल, पर्वत कुस्मा २०७६ वैशाख २५ । पर्वतको महाशीला गाउँपालिकाले एक घर एक टनेल कार्यक्रम ल्याएर गाउँपालिकालाई नै तरकारीमा निर्भर वनाउने लक्ष्य लिएको छ । एक घर एक टनेलको अवधारणा अनुसार गाउँपालिका कार्यलयले हरेक वडाहरुमा टनेल समेत वितरण गरिसकेको छ । गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वार्ड नं ५ लुङ्खुका वार्ड अध्यक्ष जीवन उच्चै ठकुरीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सम्म गाउँपालिका सवै वडाहरुमा १२ सय ५० वटा टनेल वितरण भैसकेको छ । वार्ड नम्वर ५ लुङ्खुमा २ सय ५० वटा वितरण गरिएको र अन्य वडावासीलाई पनी छिट्टै वितरण गर्ने ठकुरीले वताए ।
गाउँपालिकाको रु ३० लाखको लागत तथा योजनामा हरेक घरधुरीलाई टनेल वितरण हुने भएको हो । कृषीलाई व्यावसायिक वनाउने र तरकारीमा परनिर्भरता हटाई व्यावसायिक कृषीवाट समृद्ध महाशीला वनाउने योजना सहित यो कार्यक्रम ल्याईएको प्रवक्ता ठकुरीको भनाई छ । उनले भने “अहिले सम्म गाउँघरमा तरकारी खेती गरेपनी टनेल वाट खेती गर्नेहरु थिएनन् । परम्परागत रुपमा गर्दै आएको तरकारी खेतीले स्थानियको घरपरिवार लाई समेत खान पुग्दैनथ्यो, वजार वाट किनेर खानु पथ्र्यो । अव कृषीमा यन्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण हुन जरुरी छ । यो योजनाले पक्कै पनि गाउँ तरकारीमा निर्भर हुनेछ गाउँमा अव कृषी क्रान्ति हुनेछ ।” पहिले टनेल महाशिलाको केन्द्र लुङ्खु देउराली वजारमा अहिले सम्म स्याङ्जाको घण्टे देउराली वजार र जिल्लाका अन्य वजारहरुवाट तरकारी आयत हुँदै आएको छ । यो योजनाले सार्थकता पाए गाउँपालिका तरकारीमा निर्भर संगै आयत होईन प्रशस्त मात्रमा निर्यात हुने सम्भावना देखिन्छ । महाशीलामा चिसो हावापानी र उर्वर खेतीयोग्य जमिनका कारण जुन खेती गर्दापनी राम्रो उत्पादन हुने कृषी प्राविधिकको भनाई रहेको छ आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा गाउँपालिकाको तेस्रो सभाले एक घर एक टनेल अभियान संचालन गर्न टनेल खरिदको लागि रु ३० लाख छुटाएको थियो ।
महाशिला गाउँपालिकाका ६ वटै वार्डका १ हजार ७ सय ७० घरधुरी मध्ये अहिलेसम्म विभिन्न वार्डका ९५३ घरका कृषकहरुलाई निशुल्क पलाष्टिक टनेल वितरण गरिएको र बाकी घरधुरीलाई पनि सकेसम्म यहि आर्थिक बर्षमा र केही बाकी रहेमा अर्को आर्थिक बर्षमा सबै घरमा टनेल वितरण गरिने उनको भनाई छ । कृषकहरुका समस्या समाधान गर्नको लागि गाउँपालिकाले महाशिला स्वयंसेवक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि प्राबिधिक गाउँगाउँमा खटाएको छ ।
कृषको घरघरमा पुगेर बिउ,मल र माटोको बारेमा बेलाबेलामा कृषकहरुलाई प्राविधिक ज्ञान सिकाउदै आएको कृषि प्राबिधिक आशादेवि शर्माले बताइन् ।
स्थानीयले गाउँघरमै पाइने बाँस र काठबाट टनेल बनाएका छ्न । स्थानीय कृषक रामबहादुर हमालले खुसी हुँदै भने “पालिकाले टनेल र बिउ दिएको छ, प्राबिधिक ज्ञान पनि सिकाएको छ, अब तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गरि व्यवसायीक बन्ने योजना बनाएको छु ” । अर्का कृषक धनकुमारी बिकले भनिन “घरमा कृषि प्राविधिकहरु आइरहनुहुन्छ धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ,गाउँपालिकाले बेलाबेलामा तालिम दिएको छ, तरकारी उत्पादनमा सजिलो भएको छ” । गाउँपालिकाले नि:शुल्क रुपमा पलाष्टिक टनेल सहयोग गरेपछि कृषकहरु खुशी छन् ।
उत्कृष्ट स्वयंसेविका र बालविकास सहजकर्ता सम्मानित : शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको अतुलनीय योगदानको कदर !